ဘယ်သူမဆို ဖွံ့ဖြိုးအောင် ပျိုးထောင်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက် (၇)ခု - Lifestyle Myanmar
ဘယ်သူမဆို ဖွံ့ဖြိုးအောင် ပျိုးထောင်နိုင်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက် (၇)ခု
လူအများစုက သူတို့ရဲ့ ပင်ကိုစရိုက်တွေဟာ မွေးကတည်းက ပါလာတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ အချို့သော သူတွေက ဟာသဉာဏ်နှင့် ဆွဲဆောင်မှုများစွာဖြင့် မွေးဖွားလာကြသော်လည်း အခြားသူတွေမှာ ဒီအင်္ဂါရပ်တွေကင်းမဲ့ပြီး ရရှိဖို့ မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။ အများစုက အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်တွေကို ပေါ့ပေါ့တန်တန် သဘောထားခြင်း ၊ ကိုယ်ပိုင်စရိုက်လက္ခဏာတွေကို တိုးတတ်စေဖို့နှင့် တိုးတတ်ဖို့ နည်းလမ်းတွေ အမြဲမစဉ်းစားမိကြပါဘူး။
သို့သော် ယေဘုယျအားဖြင့် ပြောရရင် သင်ဟာ ပိုမိုဆွဲဆောင်မှုရှိသော ၊ အောင်မြင်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လာစေဖို့ အပြုသဘောဆောင်တဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက် အားလုံးနီးပါးကို ဆည်းပူးနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ယနေ့မှာ သင့်ဘဝကို အပြည့်အဝအကျိုးရရှိစေဖို့ တိုးမြှင့်နိုင်တဲ့ အရည်အသွေးအချို့ကို စုဆောင်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်။
၁။ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှု (Self-confidence)
မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသူတွေဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကို အမြဲတမ်း သံသယဝင်နေတတ်သူတွေထက် အားသာချက်ရှိပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ စိတ်ဓါတ်ခိုင်မာတဲ့သူတွေဟာ တခြားသူတွေကို လှုံ့ဆော်ပေးပြီး အခြေအနေတွေကို ထိန်းချုပ်ပါတယ်။ မကြာသေးမီက ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ သုတေသနအရ မိမိကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသော သူတွေဟာ ဝင်ငွေပိုရပြီး အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလုပ် အဆင့်ဆင့်ကို ပိုမိုမြန်ဆန်စွာ တတ်လှမ်းနိုင်ပါတယ်။
Confident ပိုရှိစေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းက လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အပေါ် ထိန်းချုပ်မှုနှင့် အာရုံစုစည်းမှု ခံစားချက်တွေက ရုပ်ပိုင်းနှင့် စိတ်ခံစားမှုပိုင်းဆိုင်ရာ တည်ငြိမ်မှုကို ပေးစွမ်းပါတယ်။ အခြားသူတွေရဲ့ တုံ့ပြန်မှုတွေကို သင်လိုက်နာမှရမယ့် စည်းမျဉ်းအဖြစ် ကိုယ့်ရဲ့သိမြင်မှုကို အနှောက်အယှက်မပေးပါနဲ့။ သူတို့ဆီက ခွင့်ပြုချက် ယူဖို့ လိုအပ်တယ်လို့ မခံစားပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံကြည်မှုရှိသူတွေဟာ ကိုယ့်ဘဝကိုယ် ထိန်းချုပ်နိုင်ပြီး ကိုယ့်လုပ်ရပ်အတွက် တာဝန်ယူတတ်ကြပါတယ်။
၂။ “No” လို့ပြောနိုင်စွမ်း
“No” လို့မပြောနိုင်ခြင်းက self-esteem နိမ့်နေခြင်းကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင် အမြဲတမ်းကူညီဖို့ ရယ်ဒီဖြစ်နေသူတွေဟာ ဒီအင်္ဂါရပ်ကို တန်ဖိုးထားတာ ရှားပါတယ်။ အခြားသူတွေ အသိအမှတ်ပြုလား/မပြုလားဆိုတာကို မရှာကြပါဘူး။ ဘယ်အကူအညီမဆို သာမန်အဖြစ်သာ မကြာခဏ မြင်ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် “No” လို့ပြောနိုင်စွမ်းမရှိသူဟာ ကိုယ်လုပ်တာရော၊ မလုပ်ချင်တာပါ လုပ်ပေးရနိုင်ပါတယ်။
အချိန်မရွေး “No” လို့ပြောဖို့ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကူညီပေးနိုင်သူဟာ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်တာကြောင့် သင်ငြင်းဆန်လိုက်ခြင်းအားဖြင့် လူတစ်ယောက် စိတ်ဆိုးမှာ မကြောက်ပါနဲ့။ ဒါက သင့်ရဲ့ကြင်နာမှုကို အသုံးချတတ်တဲ့ ကပ်ပါးကောင်တွေကို ဖယ်ရှားပစ်ဖို့လည်း ကူညီပါလိမ့်မယ်။ တကယ် strong ဖြစ်တဲ့သူဟာ တောင်းဆိုမှုကို ငြင်းလိုက်ခြင်းနှင့်ပတ်သတ်ပြီး ကြောက်စရာမရှိကြောင်းနှင့် သူတို့ကို ကူညီဖို့ အမြဲတမ်းမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကို နားလည်ပါတယ်။
ပျော်စရာ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးတွေရှိပြီး ကျရှုံးနေရင်တောင် ရယ်မောနိုင်သူတွေကို လူတွေက ကြိုက်ကြပါတယ်။ ရယ်မောခြင်းက စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ရင်ဆိုင်ဖို့ ။ အကောင်းမြင်ဖို့နှင့် တခြားသူတွေနဲ့ ပြောဆိုဆက်ဆံမှုမှာ အကူအညီ ဖြစ်ပါတယ်။ တခြားလူတွေက ဟာသဉာဏ်ရှိသူတွေကို ပိုပြီးတန်ဖိုးထားတတ်ကြပါတယ်။ ပေါင်းရသင်းရကောင်းပြီး ပျော်စရာကောင်းတဲ့အတွက် ဒီလိုလူတွေကို သူတို့အနားမှာ ရှိစေချင်ကြပါတယ်။
ဒီစရိုက် ဖွံ့ဖြိုးဖို့ အရမ်း seriously ဖြစ်လွန်းတဲ့ အမူအရာတွေ လုပ်တာ ရပ်တန့်ပါ။ အခြားသူတွေက မှတ်ချက်တွေကို ပြက်လုံးတွေနဲ့ ဘယ်လိုတုံ့ပြန်သလဲဆိုတာ စောင့်ကြည့်ပါ။ အသေးအမွှားလေးကအစ စိတ်ဆိုးတာ မလုပ်ပါနဲ့။ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ရယ်မောနိုင်ဖို့ သင်ယူပါ။ ပြက်လုံးများစွာဟာ သံတူကြောင်းကွဲကို အခြေခံထားတာကြောင့် သင့်ရဲ့ ဆက်စပ် စဉ်းစားတွေးခေါ်နိုင်စွမ်းကို မြှင့်တင်နိုင်ပါတယ်။
တစ်ချို့တွေက အလုပ်အရမ်းများတဲ့သူတွေကို အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ သူတွေလို့ ပြောကြပေမယ့် လေ့လာမှုအရ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တဲ့ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အရမ်းအလုပ်မများကြပါဘူး။ စွမ်းဆောင်ရည်နှင့် ရလဒ်ပိုကောင်းဖို့အတွက် ဘယ် messenger မဆိုပိတ်ထားပါ။ သင့်ဖုန်းကို vibrate လုပ်ထားပါ။ သင့်ကို အာရုံပျံ့လွင့်စေရင် သီချင်းနားမထောင်ပါနဲ့။ ပြီးမြောက်ဖို့ လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းအတွက် မိမိကိုယ်ကို နှစ်မြှုပ်ထားပါ။ အစာစားခြင်းက အစာစားချင်စိတ်နှင့်အတူ လာသလို အလုပ်နှင့်အတူ လှုံ့ဆော်မှု လာပါတယ်။
activities တွေအကြား ကူးပြောင်းနေစဉ်မှာ ဦးနှောက်က အလုပ်စလုပ်ဖို့ ခက်ခဲပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဦးနှောက်အတွက် ခက်ခဲတဲ့အရာတွေကို ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားကြတာကြောင့် လှုံ့ဆော်မှု ပျောက်ကွယ်သွားတတ်ကြပါတယ်။ ထို့အပြင် အိပ်ချင်ခြင်း (သို့) ဗိုက်ဆာတဲ့ ခံစားမှုတွေဟာ အာရုံပျံ့လွင့်စေတာကြောင့် ကျန်းမာသော daytime စနစ်ကို လိုက်နာဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။
၅။ တခြားသူတွေရဲ့စိတ်ကို ဖတ်နိုင်စွမ်း
လူအများစုက အခြားသူတွေရဲ့စိတ်ကို ဖတ်နိုင်ခြင်းဟာ သာလွန်ထူးကဲသော လူတွေမှာသာရှိတဲ့ စူပါပါဝါတစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ထင်ကြပါတယ်။ သို့သော် ဒါက အပြည့်အဝ မမှန်ပါဘူး။ သင်လုပ်ဖို့ လိုအပ်တာက အခြားသူတွေကို နားထောင်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အခြားသူတွေရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို နားလည်ဖို့နှင့် သူတို့အပြုအမှုရဲ့ နောက်ကွယ်က အကြောင်းရင်းများကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့ဘာလုပ်နေလဲ၊ သူတို့ဘာပြောနေလဲ? သူတို့ဘယ်နေရာကို ကြည့်နေတာလဲ၊ သူတို့ကို ပြုံးစေတဲ့သူက ဘယ်သူလဲ? ဆိုတာကို အာရုံစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီသဲလွန်စတွေအားလုံးကို ပေါင်းလိုက်ရင် အမှန်တရားကို တွေ့မြင်ဖို့ လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်။ ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါက သင့်အားလပ်ချိန်အားလုံးကို ဖြုန်းသင့်တဲ့အရာ မဟုတ်ပါဘူး။
၆။ လူတွေကို ဆွဲဆောင်နိုင်စွမ်း
တစ်ချို့လူတွေက အရမ်းချစ်စရာကောင်းကြလို့ လူတိုင်းက ကြိုက်နှစ်သက်ကြပြီး သူတို့အနားမှာ ရှိနေချင်ကြပါတယ်။ ဒီလူတွေမှာ ဘယ်သူမဆို develop လုပ်နိင်တဲ့ သြဇာတိက္ကမနှင့် ပြည့်စုံခြင်းဆိုသော အရည်အချင်းတစ်ခု ရှိပါတယ်။
တစ်စုံတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောတဲ့အခါ မျက်လုံးချင်းဆုံမိအောင် ကြိုးစားပါ။ အဖော်ကို အေးဆေးတည်ငြိမ်စွာကြည့်ပါ။ ပြုံးဖို့မမေ့ပါနဲ့။ Charismatic တွေဟာ အခြားသူတွေကို နားထောင်ပေးတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သင့်အကြောင်းသင်ပြောဖို့ အလျင်စလို မလုပ်ပါနဲ့။ မေးခွန်းတွေမေးခြင်းက ပိုကောင်းကြောင်း သတိရပါ။
တစ်စုံတစ်ယောက်က စော်ကားပုတ်ခတ်ရင် သင့်စိတ်ခံစားချက်တွေကို မဖိနှိပ်ပါနဲ့။ သင့်ကိုနာကျင်စေတဲ့ စကားလုံးတွေကို ကြာရှည်ပြောချိန် ပေးမယ့်အစား စကားပြောဆိုမှုကို ရပ်တန့်ခြင်း (သို့) ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကို ရုတ်တရတ် ပြောင်းလဲခြင်းအားဖြင့် သင်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ အပြန်အလှန်အားဖြင့် လူတစ်ယောက်က သင့်ကို ဖွင့်ပြောရင် သင်လည်း ဖွင့်ပြောနိုင်ပါတယ်။
၇။ သင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ တုံပြန်မှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်း
ချုပ်တည်းမှုဆိုတာ ကိုယ့်စိတ်ခံစားချက်နှင့် အပြုအမှုကို ထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်၊ ဒါက လူတွေကို သူတို့ရဲ့ ပန်းတိုင်သို့ ရောက်အောင် ကူညီတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက အကျိုးရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆက်ဆံရေးနှင့် အောင်မြင်သော အသက်မွေးဝမ်းကျောင်း တည်ဆောက်ဖို့အတွက် လုံးဝလိုအပ်ပါတယ်။ ဒီစွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတတ်ဖို့ သင့်စိတ်ခံစားမှုကို နားလည်ဖို့နှင့် ဆုံးဖြတ်ရန် သင်ယူဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
နှလုံးခုန်မြန်ခြင်း၊ ကြွက်သားတင်မာခြင်းနှင့် စွမ်းအင်ကင်းမဲ့ခြင်း (သို့) အစာစားချင်စိတ်မရှိခြင်းက စိုးရိမ်မှုလက္ခဏာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အသက်ရှုလေ့ကျင့်ခန်းနှင့် တရားထိုင်ခြင်းက သင့်ကိုယ်သင် တည်ငြိမ်အောင် ကူညီနိုင်ပါတယ်။ အထူးလေ့ကျင့်ခန်းတွေလုပ်ခြင်းဖြင့် စိုးရိမ်စိတ်လွန်ခြင်းကို ရပ်တန့်နိုင်ပါတယ်။
ဒီစရိုက်လက္ခဏာတွေထဲက ဘယ်ဟာကို သင်မွေးမြူချင်ပါသလဲ? သူတို့က သင့်ကို ကူညီနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါသလား? ထင်မြင်ချက်လေးတွေေ မျှဝေပေးနိုင်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ နားထဲမှာ ထူးဆန်းတဲ့ အသံမြည်သံကို ခံစားဖူးပါသလား။ ဒါဟာ တစ်ခါတလေမှာ ဆိုးရွားလွန်းတဲ့ အရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ခဏလေးနဲ့ ပျောက်ကွယ်မသွားဘဲ အချိန်တွေအကြာကြီးဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခါ ပိုဆိုးပါတယ်။ လူအများစုက နားအူတယ်လို့ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ ယူဆကြပေမယ့်လည်း စိတ်ဝိညာဥ်နဲ့...
ပေးကမ်းခြင်း၊ ပေးဆပ်ခြင်းဆိုတာ ကြင်နာတတ်တဲ့နှလုံးသားမှာအမြစ်တွယ်နေနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အလွန်အကျွံမပေးဆပ်မိဖို့ ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့ ပေး ဆပ်ခြင်းဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက ရေရှည်မှာ မိမိကိုယ်နဲ့အခြားသူတွေကို မထိခိုက်စေပဲ ဘယ်သူ့ကို ဘယ်အချိန်မှာ ဘယ်လိုပေးရမယ်ဆိုတာကို ဆင်ခြင်တုံတရားနဲ့မှထိန်းကျောင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ သင်ဟာအလွန်အကျွံပေးကမ်းတတ်သူတစ်ယောက်လား? နောင်တနဲ့ဆိုးကျိုးတွေကိုမပြောခင် သိထားသင့်တာလေးတွေအရင်ဖတ်ကြည့်လိုက်ပါဦးမိတ်ဆွေတို့. လူအုပ်စု...
အချစ်ဆိုတာ ဘယ်လိုစံနှုန်းတွေထားပီး ဘယ်လိုကျမှပဲ ချစ်မယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်သတ်မှတ် အချစ်က သူသွားချင်တဲ့နေရာသွားတတ်တာပါ။ အင်္ဂလိပ်စကားပုံတစ်ခုရှိတယ်။ "ငါ့နှလုံးသားရဲ့တခါးဝမှာ ဝင်ခွင့်မရှိလို့ စာတမ်းချိတ်ထားခဲ့တယ်။ အချစ်ကရောက်လာပီး ကြေငြာလိုက်တယ်။ ငါကတော့ နေရာတကာဝင်တာပဲ"တဲ့။ အင်းခုလည်း ပြောပြချင်တာက ကိုယ့်ထက်အသက်ငယ်တဲ့ကောင်လေးတွေနဲ့ ချစ်သူရည်းစားဖြစ်နေတဲ့မမတွေကို ကြုံ့တွေ့ခံစားရမယ့်...
လူတိုင်းက ချစ်သူ၊ သူငယ်ချင်း (သို့) မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ယောက်ဆီက ဒီလိုအနမ်းမျိုးကို လိုချင်ကြပါတယ်။ နဖူးကို နမ်းတယ်ဆိုတာ ထူးခြားတဲ့အရာပါ။ ၎င်းက ချစ်ခြင်းမေတ္တာ ၊ နှစ်သိမ့်မှုတွေနှင့် ခံစားမှုတွေကို ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကမ္ဘာပေါ်ကအထူးခြားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေ ဖြစ်သွားကြပါတယ်။...